By ခင်မောင်ထွေး (ပျဉ်းမနား) 22 February 2013
အရှေ့တောင် အာရှ အားကစားပွဲတော် ဖွင့်ပွဲနေ့မှာ မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ဖို့ အတွက် ရွှေတံဆိပ်ရ အားကစား မောင်မယ်တွေ လျှောက်ထား နိုင်ကြောင်း လျှောက်လွှာခေါ်သည့် သတင်း တပုဒ် အားကစား သတင်းစာထဲတွင် ဖတ်လိုက်မိသည်။ ယင်း သတင်းနှင့် နွှယ်ကာ ကမ္ဘာ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲများတွင် မီးရှူးတိုင် သယ်ယူခြင်း၊ ဗဟို အားကစား ပြိုင်ဝင်းကြီး အတွင်းရှိ ပင်မ မီးရှူးတိုင်ကြီးကို ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ထွန်းညှိပြီး ပိတ်ပွဲနေ့တွင် မီးငြှိမ်းလိုက်သည့် အခမ်းအနား ကို ပြန်တွေးမိသည်။
အိုလံပစ် မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခြင်း ထွန်းညှိခြင်း စသည့် အခမ်းအနားများမှာ ခရစ်တော် မပေါ်မီ ၇၇၆ ခုနှစ်တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့ခြင်း မရှိပါ။ တဖန် ပြင်သစ် ပညာရှင် ပါရီဒီကို ဘာ့ဇင့် ဦးဆောင်ပြီး ၁၈၉၆ ခုနှစ်တွင် ကျင်းပသည့် ခေတ်သစ် အိုလံပစ်ပွဲ အစတွင်လည်း မပါဝင်ခဲ့ပါ။
ထူးခြားစွာပင် ဂျာမနီနိုင်ငံ အာဏာရှင် အဒေါ့ဖ် ဟစ်တလာ လက်ထက်တွင် ကျင်းပသည့် ၁၁ ကြိမ်မြောက် ကမ္ဘာ့အိုလံပစ် အားကစား ပွဲတော် ၁၉၃၆ ဘာလင်အိုလံပစ် ကျမှ စတင်ထည့်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဂရိနိုင်ငံ အိုလံပီယာ တောင်ခြေတွင် အပျိုစင် အမျိုးသမီးလေးများက နေရောင်ခြည်မှ ရသည့် အပူငွေ့ဖြင့် မီးရှူးတိုင်ကို ထွန်းညှိပြီး ဂျာမနီ နိုင်ငံ ဘာလင်သို့ လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ဆောင်ခဲ့ကြကာ ဘာလင် အိုလံပစ် အားကစား ပြိုင်ဝင်းထဲရှိ ပင်မ မီးရှူးတိုင်ကြီးကို ဖွင့်ပွဲနေ့တွင် ထွန်းညှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်တဖန် ဒေသဆိုင်ရာ အားကစား ပြိုင်ပွဲကြီးများတွင်လည်း မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင် ထွန်းညှိခြင်း အခမ်းအနားများကို ခမ်းနားစွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပသည့် ဒုတိယ အကြိမ် အရှေ့တောင် အာရှ ကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲ ၁၉၆၁ တွင် မီးရှူးတိုင်ကို နောက်ဆုံး အားကစား ပြိုင်ဝင်းထဲမှ ယူဆောင်လာသည်။ ပင်မ မီးရှူးတိုင်ကို ထွန်းညှိသူမှာ ထိုစဉ်က အမျိုးသား ကိုယ်လက် ကြံ့ခိုင်ရေး ကောင်စီ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဝိတ် ဖြစ်သည်။ သို့သော် အမျိုးသား ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်ရေး ကောင်စီ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် နောက်ဆုံး မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့်ရခြင်း မဟုတ်ပါ။
၁၉၃၆ ခုနှစ် ဘာလင် အိုလံပစ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာအလေးမ ချန်ပီယံ ဦးဇော်ဝိတ်ကို ဂုဏ်ပြုသော အားဖြင့် နောက်ဆုံးမီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့် ရခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
အိုလံပစ် အားကစားပွဲတွင် ထွန်းညှိမည့် မီးရှူးတိုင်ကို အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည် ဖြတ်သန်း သယ်ဆောင်ရာတွင် ဖြတ်သန်း ခဲ့သည့် နိုင်ငံတိုင်းမှ အားကစားသမား အကျော်အမော်များကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ကျွန်းဆွယ်ပွဲ အတွက် မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ခွင့် ရသည့် မြန်မာ့ ဂုဏ်ဆောင် အားကစား သမားကြီးများ၏ အမည်စာရင်းတွင် ဦးဇော်ဝိတ်မှ လွဲ၍ ရှာမတွေ့သေးပါ။
၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် ၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှကျွန်းဆွယ် အားကစားပြိုင်ပွဲ ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပသည်။
ကျွန်းဆွယ်မီးတိုင် သယ်သည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အားကစားသမားများ စာရင်းရသည်။ (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ထံမှ ဟံသာဝတီ သတင်းစာများကို သားကြီး ကိုသက်က ယူလာပေးခြင်းဖြစ်သည်) ဟံသာဝတီ သတင်းစာတွင် ပါသည့် မီးရှူးတိုင် သယ်သော သတင်းအပြည့်အစုံကို နှောင်းလူများ သိစေရန် အတွက် အပြည့်အစုံ ကူးယူဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
“၃ နာရီ ၁၀ မိနစ်တွင် မြို့တော် ခန်းမမှ သယ်ဆောင်လာသော မီးရှူးတိုင် ကွင်းအတွင်းသို့ ရောက်ရှိလာပြီး (ပင်မ) မီးရှူးတိုင်ကြီးတွင် မီးထွန်းညှိလိုက်သည်။ ၃ နာရီ ၁၅ မိနစ် တွင် ၅ ကြိမ်မြောက် ကျွန်းဆွယ် အားကစား ပြိုင်ပွဲ သီချင်းကို သံပြိုင်သီဆိုကြသည်။
စောစောပိုင်းက ၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ ကျွန်းဆွယ် အားကစားပွဲ ကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်ကျော်၊ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်ထင်နှင့် ဦးလှထွန်း၊ ပြိုင်ပွဲကြီးကြပ် ခန့်ထားရေး ကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်မှူးကြီး လှမိုး၊ ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်စိန်ထွန်းနှင့် မြူနီစပယ် မင်းကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး မျိုးအောင်တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
မီးရှူးတိုင်သည် နေရောင်ခြည်မှ ကူးထားသော မီးဖြင့် ထွန်းညှိထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ဗိုလ်မှူးကြီး မောင်ကျော်က မီးထွန်းထားသော မီးခွက်ငယ်ထဲမှ မီးရှူးတိုင်သို့ တဆင့်ပွားပြီး မြန်မာ့လက်ရွေးစင် လက်ဝှေ့ချန်ပီယံ တင်ထွန်းလက်သို့ တဆင့် ကမ်းလေသည်။ တင်ထွန်းနှင့် အတူ မြန်မာ့လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား စိုးမြင့်၊ ဘတ်စကက်ဘော လက်ရွေးစင် ညွန့်မောင်၊ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား တင်အေး၊ ဝါးလုံးထောက်ခုန် ချန်ပီယံ စိုးမရ၊ အာရှချန်ပီယံ လက်ဝှေ့ သမား သိန်းမြင့်၊ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ကျော်သောင်း၊ ဘတ်စကက်ဘော လက်ရွေးစင် အုန်းလွင်၊ လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမား ဟန်သိန်း၊ လက်ရွေးစင် ဘောလလီဘော သမား ကျော်ညွန့်နှင့် လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားဟောင်း မောင်မောင်တို့က ဆူးလေဘုရားလမ်း တံခါးဝကြီးမှ ထွက်၍ မဟာဗန္ဓုလ လမ်း၊ ထိုမှ တဆင့် ဘားလမ်း၊ ဘားလမ်းမှ ကုန်သည်လမ်း၊ ကုန်သည်လမ်းမှ ပြန်ကွေ့၍ အဆင့်ဆင့် လက်ဆင့်ကမ်းကာ ဆူးလေဘုရားလမ်း ခုံးတံတားမှ ဆင်း၍ အောင်ဆန်း အားကစား ပြိုင်ဝင်း တောင်ဘက် ဝင်ပေါက်၌ အသင့် စောင့်နေသော ၁၁ ယောက်မြောက် မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်သူ မောင်မောင် (ရေတပ်) လက်ထဲသို့ လက်ဆင့် ကမ်းသည်။ မောင်မောင်သည် အောင်ဆန်း အားကစား ပြိုင်ဝင်းကို ပြေးလမ်းအတိုင်း လက်ဝဲရစ် တပတ် ပတ်ပြီး အရှေ့ဘက် ပွဲကြည့်စင် အလယ်ဗဟို သီးသန့် လှေခါးမှ တက်ပြီး စင်မြင့်ပေါ်တွင် ရှိသော ပင်မ မီးရှူးတိုင် ကြီးတွင် ထွန်းညှိလိုက်သည်”
ဤသည်မှာ ၁၉၆၉ ခုနှစ်တွင် မြန်မာပြည်၌ ကျင်းပခဲ့သော ၅ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင်အာရှ ကျွန်းဆွယ် အားကစား ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ မီးရှူးတိုင် သယ်ယူထွန်းညှိပုံကို ရေးသားထားသည့် သတင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံတကာ အားကစားပြိုင်ပွဲကြီးတိုင်းတွင် မီးရှူးတိုင် ထွန်းညှိခြင်း စသည့် အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းလေ့ ရှိသည်။ ထိုသို့ မီးရှူးတိုင် သယ်ဆောင်ရာတွင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံများက ဂုဏ်ထူးဆောင် အားကစား သမားများကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် ထည့်သွင်း အသုံးပြုကြသည်။ မီးရှူးငယ်မှ တဆင့် နောက်ဆုံး မီးရှူးတိုင်ကြီးကို ထွန်းညှိသည့် နေရာတွင်လည်း သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ၏ အထူးထင်ရှားကျော်ကြားသည့် အားကစား သမားများကို အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ဤဆောင်းပါး ရေးနေစဉ်မှာပင် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ၌ ကြော်ငြာတပုဒ် ပါလာသည်။ ယင်း ကြော်ငြာကို ဦးစွာ မူရင်းအတိုင်း ဖော်ပြပါသည်။
“မီးရှူးတိုင် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ယူရန် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲနှင့် အထက် ပြိုင်ပွဲများတွင် ရွှေတံဆိပ် ရရှိသော အားကစား သမားများ ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။
၂၇ ကြိမ်မြောက် အရှေ့တောင် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် မီးရှူးတိုင် လက်ဆင့်ကမ်း သယ်ယူရန် အတွက် ရွှေတံဆိပ် ဆုရှင် အားကစားသမား (စေတနာ့ဝန်ထမ်း) ၄၀ ဦး လိုအပ်ပြီး အောက်ပါ သတ်မှတ်အရည် အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူများ လျှောက်ထားနိုင်သည်။
(၁) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံသားဖြစ်ရမည်၊
(၂) (ကျား၊ မ) မရွေး၊ အသက်အရွယ် မရွေး ကန့်သတ်ချက် မရှိ လျှောက်ထားနိုင်သည်၊
(၃) အရှေ့တောင်အာရှ ပြိုင်ပွဲများနှင့် အထက် ပြိုင်ပွဲများတွင် ရွှေတံဆိပ် ရရှိခဲ့သူများ ဖြစ်ရမည်၊
(၄) ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်ပြီး မီတာ ၄၀၀ ကို မနားတမ်း ခြေကြွပြေးနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်၊
(၅) ရွေးချယ်ခြင်း ခံရပါက အကြိုဇာတ်တိုက် လေ့ကျင့်ခြင်း၊ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ ဆောင်ရွက်စဉ် ကာလအတွင်း ဝတ်စုံနှင့် စားသောက်ရေး၊ နေထိုင်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးမည်၊
(၆) လျှောက်ထားသူ၏ ရောင်စုံပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံ၊ ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းနှင့် ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာ အပြည့်အစုံ ကို ဖော်ပြပြီး လျှောက်ထားရမည်၊
(၇) လျှောက်ထားမှုကို ၃၁. ၃. ၂၀၁၃ ရက် နောက်ဆုံးထားပြီး အောက်ပါ ဌာနများတွင် စုံစမ်း မေးမြန်း လျှောက်ထားနိုင်သည်။
ဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ အခမ်းအနား အောင်မြင်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင် လေ့ကျင့်ရေး ကော်မတီရုံး၊ ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် ၃၅၊ နေပြည်တော်။ ဖုန်း ၀၆၇- ၄၀၈၄၅၄၊ ဦးအုန်းမြင့်ဦး၊ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ ဖုန်း ၀၉ ၈၃၁၄၀၇၆၊ ၀၆၇- ၄၀၆၁၈၃”
ကြော်ငြာ အပြည့်အစုံကတော့ အထက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။ အတိုချုံးကြည့်လျှင် လာမည့် နေပြည်တော် ဆီးဂိမ်းဖွင့်ပွဲ နေ့တွင် မီးရှူးတိုင်ကို သယ်ဆောင်ရာ၊ ထွန်းညှိရာတွင် အရှေ့တောင်အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲနှင့် အထက် ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် အားကစားသမား ၄၀ ကို အသုံးပြုမည်၊ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင်များက ပါဝင်လိုလျှင် လျှောက်ထားကြရမည်။ အား/ ကာ (သို့မဟုတ်) ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာနက လျှောက်ထားသူများထဲမှ အရည်အချင်း ပြည့်မီသူများကို ရွေးမည်၊ ကျွန်းဆွယ်၊ ဆီးဂိမ်းနှင့် အာရှ အားကစား ပြိုင်ပွဲတွင် ရွှေတံဆိပ် ရခဲ့သည့် မြန်မာ လက်ရွေးစင် အားကစား သမားကောင်းကြီးများ လျှောက်ထားကြရန် ကြော်ငြာခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ကာလ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း၌ အမြင့်ဆုံးနေရာတွင် ရှိနေသည့် ရွှေခေတ်မှ ရွှေတံဆိပ်ဆုရှင် အားကစားသမားများ၊အရပ်ဘက်၊ စစ်ဘက်တွင် တာဝန်ကြီး အထိ ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး အနားယူခဲ့ကြသည့် ရွှေ လက်ရွေးစင် အားကစားသမား ကောင်းကြီးများ၊ စီးပွားရေး လောကတွင် ကျင်လည်ပြီး သန်းကြွယ်သူဌေးဘ၀ ရောက်နေကြသည့် ကျွန်းဆွယ်နှင့် အာရှ အားကစားပွဲ တို့တွင် ရွှေတံဆိပ် ဆွတ်ခူးခဲ့ကြသည့် ရွှေသူကြွယ်ကလေးများ၊ ယနေ့ထက်တိုင် အားကစားလောကတွင် ကျင်လည်နေဆဲ ဖြစ်သည့် ရွှေချန်ပီယံများ အနေဖြင့် ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းပေး၊ ပတ်စ်ပို့ ဓာတ်ပုံပေးပြီး လျှောက် မလျှောက်ကိုမူ စောင့်နားထောင် ကြရပါတော့မည်။ ။